भारतमा दिएको बयानका कारण जर्मन नौसेना प्रमुखले किन राजीनामा दिनुपर्‍यो ?
एजेन्सी । जर्मनीको नौसेना प्रमुखले भारतमा दिएको बयानका कारण शनिबार आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपरेको छ । नौसेना प्रमुख के-अखिम शुनबेखले शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा भनेका थिए, ‘रुसमाथि आक्रमण गर्ने युक्रेनको विचार ‘बकवास’ हो र पुटिन सम्मानको योग्य छन्।’
जर्मनी रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले भाइस एडमिरलले तत्काल माथिल्लो तहको दबाबको कारण शुनबेखले राजीनामा दिएको पुष्टि गरेका छन्। नयाँ दिल्लीमा भएको भेटमा सुनबेखले भनेका थिए, ‘पुटिन सम्मान चाहन्छन् र उहाँलाई आफूले चाहेको सम्मान दिन सकिन्छ र उहाँ यसको हकदार पनि हुनुहुन्छ ।’
राजीनामा पछि के भन्नुभयो ?
शुनबेखले राजीनामापछि अझ थप क्षति हुन नदिन तत्काल आफ्नो भूमिकाबाट राजीनामा दिएको बताएका छन् । नयाँ दिल्लीमा जर्मन नौसेनाका प्रमुखले २०१४ मा रूसले कब्जा गरेको क्रिमियन प्रायद्वीपको कब्जाको बारेमा पनि बोलेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘क्रिमिया गइसक्यो, अब फर्केर आउँदैन ।’
युक्रेनका विदेशमन्त्रीले शुन्बेखको भनाइ स्पष्ट रूपमा अस्वीकार्य भएको बताएका छन्। रुसको सम्भावित आक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै अमेरिका र बेलायतलगायत धेरै देशले युक्रेनलाई हतियार आपूर्ति गरेका छन् । तर, जर्मनीले हतियार पठाउन युक्रेनको अनुरोधलाई अस्वीकार गरेको छ ।
सरकारले चीनसँग जोड्ने सडकलाई दियो प्राथमिकता १ मिनेट पहिले
रेल र मेट्रो रेलका लागि ६ अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन ४ मिनेट पहिले
जलस्रोत तथा सिँचाइका लागि ३३ अर्ब ५० करोड विनियोजन ७ मिनेट पहिले